युरोकप सेमिफाइनलमा स्पेन भर्सेस इटालीः कसको पल्ला भारी? | सबै खेल
युरोकप सेमिफाइनलमा स्पेन भर्सेस इटालीः कसको पल्ला भारी?
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल युरोकप २०२० समाचार
२२ असार २०७८, मंगलवार ०१:४०
युरोकप २०२० को सेमिफाइनलमा युरोपका दुई बलिया टिम इटाली र स्पेन आमनेसामने हुँदैछन्। दुई एलिट टिमबीचको यो सेमिफाइनल भिडन्त फाइनल सरह रोमाञ्चक हुनेछ।
इटाली विश्व नं. १ टिम बेल्जियमलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलसम्म पुगेको हो। जारी युरोकपमा अपराजित रहेको इटालीले सन् २०१८ यता हार बेहोरेको छैन। रोबर्ट मान्सिनि प्रशिक्षकका रुपमा आएयता इटाली अपराजित छ।
स्पेन भने क्वार्टरफाइनलमा स्विट्जरल्यान्डलाई पराजित गर्दै अन्तिम ४ मा आएको हो। टाइब्रेकरमा विजयी हुँदै स्पेनले सेमिफाइनल भिडन्त पक्का गरेको हो।
यी दुई टिमबीच युरोकपको नकआउट चरणमा लगातार चौथोपटक भिडन्त हुन लागेको हो। सन् २००८ मा क्वार्टरफाइनलमा भेट हुँदा स्पेनले जित हात पारेको थियो। युरोकपको सो संस्करणमा स्पेन च्याम्पियन नै बन्न सफल भएको थियो।
त्यसपछि युरोकप २०१२ मा भने स्पेन र इटालीबीच फाइनलमा भिडन्त भयो। फेरि पनि स्पेन नै विजयी भएको थियो। ४–० ले इटालीलाई पराजित गरेको स्पेन लगातार दुईपटक च्याम्पियन बन्दै युरोकपको इतिहासमा उपाधि डिफेन्ड गर्ने पहिलो टिम बनेकोे थियो।
दुई टिम फेरि युरोकप २०१६ को अन्तिम १६ मा पनि प्रतिस्पर्धा गरे। यसपटक भने इटाली २–० को जित निकाल्दै अघिल्ला पराजयको बदला दिन सफल भयो।
इटाली र स्पेन दुवै स्टार खेलाडीले भरिपूर्ण टिम हो। दुवै टिमका गेमचेन्जर खेलाडीको सूची बनाउने हो भने २२ जना कै नाम आउनसक्छ। कोही पनि कोहीभन्दा कम छैनन्।
युरोपका फुटबल शक्तिबीचको महाभिडन्तमा हरेक खेलाडी युरोपका शीर्ष लिगका स्टार खेलाडी छन्। त्यसमध्ये पनि सेमिफाइनल भिडन्तमा विशेष प्रभाव पार्न सक्ने केही खेलाडी छन्, जसको प्रदर्शनले यो खेलमा थप रौनक ल्याउनेछ।
◉ पाब्लो सराबिया
◉ फेरान टोरेस
◉ सर्जियो बुस्केट्स
◉ फ्रेडरिको किएजा
◉ जिआनलुइजी डोनारुमा
◉ निकोलो बरेला
◉ मार्को भेराटी
◉ लोरेन्जो इन्सिग्ने
ब्राजिल कोपा अमेरिकाको फाइनलमा, पक्वेटाको गोलमा पेरु पराजित